CHINOKONZESA - Kupokana Gender Pfungwa
CHIKONZERO (Mubatanidzwa Kupokana Nedzidzo DzeBonde Isina Kuchengetedza
Vabereki Vanokurukura Zvakachengeteka Zvikoro Gender Pfungwa
Transgender Kudemba Mavhidhiyo NaVatambi
Muzvinafundo John Whitehall's 12 Vhidhiyo yakaiswa paUdiki Gender Dysphoria
Walt Heyer - Transgender Kuzvidemba
ZVIKORO ZVAKACHENGETEKA ZVIKORO
Nezvedu - Zvinangwa Zvedu
Vabereki - Kodzero Dzedu.
Yakavanzika Policy. Terms & Mamiriro
Iyo Safe Zvikoro chirongwa chakaitwa muzvikoro muAustralia zvichidzidzisa LGBT mazano evanhurume kuvana panguva iyo hunhu hwavo hwepabonde huri kusimukira uye pavanenge vari panjodzi yekuvhiringidzika pabonde. Australia yakazoona kuputika muhuwandu hwevana vakaendeswa kumakiriniki echikadzi. Iyo webhusaiti yeCAUSE ine akawanda manyanzvi ezvinyorwa nezve transgenderism, Gender Dysphoria, Shanduko Therapy, Kuchinja pabonde uye Zvikoro Zvakachengeteka, nenyanzvi saPurofesa John Whitehall, Muzvinafundo Dianna Kenny nevamwe vazhinji.
Pfungwa dzeGender muzvikoro.
Mapepa ehunyanzvi paTransgenderism.
Vanachiremba vezvekurapa vanotsanangura chokwadi cheTransgenderism.
Prof John Whitehall Vanonyora muQuadrant Magazine pane Gender Dysphoria.
Hormone Blockers uye zvese zvinhu Transgender.
Counselling & Therapy Inoshanda.
Vaviri ex lesbians, an ex gay and an ex trans kutaura nezvekusiya kwavo kwekare LGBT inorarama. Vamwezve gumi nemaviri vanogovana nyaya dzavo dzakanyorwa nezvekuti kurairwa kwakavabatsira sei.
Walt Heyer Zvepabonde Shanduko Inodemba Webhusaiti.
Walt Heyer akararama semukadzi Laura kwamakore gumi zvisati zvaitika uye achibvuma kuti munhu haachinje bonde.
Inoda Kuti Uwane Vanopa Mazano.
Tsvaga ivo pano.
Zvikoro Zvakachengeteka Gender Pfungwa.
Vadzidzi muClass Roll Vanotamba LGBT Maitiro
Iyo Yakachengeteka Zvikoro chirongwa chevakadzi mafungiro akatumirwa neboka revanhu vane chimiro chaive chinokudzwa mukuti pakutanga yaive yakagadzirirwa kugadzirisa dambudziko rekushusha.
Izvo zvave zvave pachinzvimbo chakasundira miganhu kupfuura chiyero chayakapihwa mari. Isu tinomira pamwe uye tinotsigira iyo Coalition Federal Hurumende mukubvisa mari uye kutsigira chirongwa ichi muchimiro chazvino.
Iyo ajenda inosundirwa neiyo Safe Schools mubatanidzwa inovavarira vechidiki nevana pazera rinotambura uye inovavarira kuvapatsanura kubva kune yavo yechinyakare yemhuri tsika uye tsika dzenzanga kusimudzira vagari vese. Tinokumbira kuti iwe ubvise kutarisisa kubva pachirongwa ichi uye kuenda kuchirongwa chiri nani chakanangana nekugadzirisa kusanganisa uye kugamuchirwa KWETE kwakavakirwa uye kwakarerekera kuhunhu nekuita zvepabonde.
Zveucheche Gender Dysphoria. 12 Vhidhiyo Series ine Zvinyorwa.
PUROFESA JOHN WHITEHALL.
Tarisa mavhidhiyo muChirungu kana shandisa muturikiri weGoogle pane ino peji kuverenga zvinyorwa mumutauro wako.
MP Andrew Hastie anotaura pachirongwa che "Zvikoro Zvakachengeteka" muParamende yeAustralia.
Nzwisisa ajenda uye uenzanise nhandare yekutamba - tsvaga kuti sei chirongwa ichi chichingodzidziswa kuseri kwemasuo akavharwa uye pasina sarudzo yemubereki. Kana kuchengetedzeka kwevana vedu kuchikosha, kunofanirwa kuvhurwa kuongororwa uye kubatanidzwa nevose vane chekuita nekurerwa kwevechidiki kuti vanzwisise kuti isu takasiyana hunhu, takaenzana munzira dzese. Kumbira kopi yeiyo curriculum, uye kana iwe uine rombo rakakwana kuti uwane chikoro chinoda kuburitsa zvirimo, gadzirira kunzwisisa iyo foni yekuita yatinoisa pamberi pako.
Roz Ward mugadziri we "Zvikoro Zvakachengeteka" Chirongwa anobvuma kuti Zvikoro Zvakachengeteka hazvisi zvekudheerera.
Amai vanotaura nezvekutsvaga dzidziso dzechikadzi dziri kudzidziswa kuchikoro.
Nyaya yaCella nezvevana vake uye ne "Zvikoro Zvakachengeteka" Chirongwa pachikoro chavo.
Shingairira pachikoro chako. Tsvaga kuti ndeapi matanho enharaunda avanazvo pari zvino ekupemberera vanhu vakasarudzika vanoumba nharaunda - kujoina uye kupemberera zviitiko zvakawanda zviitiko zvinoiswa kutsigira nhengo dzese dzenzvimbo yavo yechikoro - kwete chete avo vane mhedzisiro inogona kutungamira pabonde. kuzivikanwa sechikonzero chekuve.
Tsvaga izvo zvinodzidziswa nechikoro chako uye zvirongwa zvavanoshandisa kudzidzisa vana nevechidiki nezvekugamuchirwa mune ese mafomati - nezve kuenzana, kunzwira tsitsi, uye kunzwisisa kwekusiyana kwemarudzi ese. Tsigira chikoro chako nekuziviswa uye nekunzwisisa kuti SAFE haina kuenzana kune avo chete vanoburitswa pabonde.
Dzorera kumashure izwi RAKANAKA - ita shuwa kuti ichi hachisi chirevo chekushambadzira kwevana kupfuura kwavo kunzwisisa uye kwepanyama yekuda kuziva. Vana vanokura pamitengo yakasiyana uye chirongwa ichi hachibvumidze izvi. Iyo inomanikidza ideology uye kutora sarudzo munzvimbo dzakaomarara zvakanaka vana vazhinji vasati vagadzirira kunzwisisa kukura nekureba kwenguva refu kwesarudzo dziri kuitwa. Kukura uye kukura pabonde HAZVIKONZESI uye nzira yekubvisa kubatanidzwa kwevabereki chirongwa ichi chinotsigira, haisi chirongwa chehutano chatinofanira kungogara pasi tobvuma. Idai Kwete! uye ita shuwa kuti chikoro chako chinoziva nezvesarudzo yako.
Tibatsire kudzivirira vana vedu.
Ipa kune iyo CAUSE. Bhengi: NAB BSB: 083-547 ACC: 87-690-0206
Copyright © 2021 CHIKONZERO (Mubatanidzwa Kupokana Nedzidzo DzeBonde Isina Kuchengetedza